Guta rakakura kwazvo reAustralia rinopinda rakakwana-vhiki mbiri kukiya
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Australia Kuputsa Nhau » Guta rakakura kwazvo reAustralia rinopinda rakakwana-vhiki mbiri kukiya
Australia Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Vanopfuura vanhu miriyoni muSydney mudhorobha, pamwe nenzvimbo dziri pedyo, vanga vatovharirwa neChishanu, asi vakuru vakafunga kuti matanho akaomarara aifanirwa kudzora musiyano.
New Sydney COVID-19 kurambidzwa kuri kutanga kushanda nhasi.
Vagari veSydney vanogona kungosiya pamba vachiita basa rakakosha, kurapwa, dzidzo, kana kunotenga.
Iko kukiya kunoshandiswawo kumatunhu akati wandei akapoterera Sydney.
Vakuru veguta reSydney vakazivisa kuti guta riri kuiswa rakakiyiwa zvachose kwevhiki mbiri. Chiziviso chekukiya chinotevera kuwedzera kwekutanga kwema anti-Covid-19 matanho mune dzimwe nzvimbo kuitira kuti kuve nekuputika kweanouraya Delta musiyano wehutachiona.
Iyo inorambidzwa, iri kutanga kushanda nhasi, inoreva Sydney vagari vanogona kungosiya pamba vachiita basa rakakosha, kurapwa, dzidzo, kana kunotenga. Vakuru vakati nhanho dzinodiwa kuitira kumisa kupararira kwehutachiona hwakasiyana hweDelta. Sydney yakatorekodha makesi makumi masere akasanganiswa neiyo COVID-80 strain.
"Kunyangwe isu tisingade kumisikidza mitoro kunze kwekunge tichifanira kudaro, zvinosuwisa kuti iyi ndiyo mamiriro atinofanira kuita," Mutungamiriri weNyika yeSouth Wales, Gladys Berejiklian akadaro.
Iko kukiya kunoshandiswawo kumatunhu akati wandei akapoterera Sydney. Dzimwe nyika dzichange dziine miganho pakuungana kwevanhu uye dzinoda masiki mukati.
Vanopfuura mamirioni vanhu mudhorobha reguta nharaunda, pamwe nenzvimbo dzepedyo, vanga vatovharirwa neChishanu, asi vakuru vakafunga kuti matanho akaomarara aifanirwa kudzora musiyano.
Iwo ekutanga marongero akanangwa akatsoropodzwa nevamwe vashandi vezvehutano, avo vakadaidzira kukiyiwa kwakazara kweguta. Kwayedza svondo rino, Berejiklian akayambira kuti Sydney iri kupinda "muchikamu chinotyisa chedenda" nekuda kwekupararira kwemusiyano weDelta.
Australia yaita zvirinani kupfuura mamwe marudzi mazhinji mukurwira Covid-19, ichinyora 30,422 kesi uye kufa kwe910 kubva pakatanga dambudziko rehutano.
Matanho akasimba anouya apo nyika zhinji pasi rese dzinotanga kumisazve COVID-19 matanho pakati pezvinonetsa pamusoro pekupararira kwemusiyano weDelta, inoonekwa seinopararira.